Boorana deemna lafa aadaafi loonii
Boorana deemna lafa aadaafi loonii Featured
Gara Boorana imaluuf kan yaadamee ganama barii Kibxata Guraandhala 21 sa'a 1:00tti ture. Ta'us, imalli keenya gaafasii hamma galaan imalaaf barbaachisu guutamanitti sa'a 7:00 ga'uuf dirqamneerra. Silaa “Imalliifi kajeellaan ganama tola” kan jedhan hafee, guyyaafannee kaane. Konkolaataa keenya keessa aartistoota, gaazexeessitoota, qorattootaa aadaafi seenaa gargaraatu jiru. Hunduu Isaanis sirna walharkaa fuudhiinsa baallii 71fa Gadaa Booranaa godinicha Ardaa jilaa Badhaasatti geggeeffamuu sababeeffachuun qorannoo geeggeessuu, daawwannaafi gabaasuuf ture kaayyoon imala kana.
Finfinnee baanee daandii saffisaa Adaamaa-Finfinnee qabannee Mojoodhaan fullaane. Mojoottiis laaqanaa keenya arrabarraa godhannee, bultii keenyaa magaalaa Shaashammannee akka ta'uuf daandii kallattii sanarraa geessuu, magaalaa Maqii, Baatuu qaxxaamurree galgalaa keessaa sa'a 2:00tti bakka bultii keenyaa geenye. Boromtaasaa magaalaa Ya'aballoo ga'uu akka qabnutti ganama sa'a 11:00tti akka imala eegallu murteeffannee gara gabaa hirribatti dachaane. Egaa oggaa daandii imalan hirribaa maaliitu nama qabaa mitiiti akkumasaatti ija libsannee dammaqne.
Boromtaas akkumaa beellamannee sa'a 11:00tti magaalaa Shaashamannee gadhiifnee daandii Magaalaa Hawaasaarraan Yaa'abal'oo geessuu cinaatti dhiifnee, daandii magaalaa Sooddoo, Arbaamincii, achirraas Magaalaa Koonsoorraan Ya'abal'oo galuuf daandii kallattii kana geessu qabannee imala keenya ittifufne. Sababiin daandii kanarraa akka imalluuf murtaa'es daandiin Hawaasaafi Diillaa gidduu imalaaf yaaddessaa akka ta'eefi daandichi manca'ee akka jiru keessa beektotarraan odeeffannoon nu qaqqabde. Daandiin kun daandii ijoo naannawaa Kibbaa gidduu gakleessa biyyattiin walquunnamsiisuu waan ta'eef maanca'uun daandii kanaa qaama dhimmichi ilaallatuun utuu sirreeffamee gaarii ta'a. Faayidaan biyyattiin daandii kanarraa artgattus olaanaa waan ta'eef, itti yaaduun barbaachisaa ta'a. Kanaafidha daandii kanarraa Kallatii keenya akka jijjiirrannuuf kan nuti dirqamne.
Lafti bari'ee aduun miidhiganiifi surraa qabduun lafarratti ifti. Hunduu kan garaasaatii dubbatee, kolfee, baacee taphata. Kaanis weeddisaa, wallee garagaraatiin walbohaarsaa, qabeenya uumamaafi dachee magariisaa daawwachaa imallaa jira. Hunduu waan argutti wallee yaadatuun faarsaa biyyasaa, nama, horii, qabeenyaa umamaa faarsaa imala. “Baadiyyaa gallaa lafa loonii Oromiyaa tiyya naaf misoomii....” wallee kanaan gandoota baadiyyaa argu, loowwan marga dheedaan ijaan waan argaa immalluuf wallee kanaan qabeenyaafi biyyasaa faarsaa imala ittifufne. Booranaa deemna lafa aadaafi loonii...
Taphni imaltootan hoo'eera. Laftis bari'uurra darbee gara guyya'uuttii adeemaa jira. Nutis waan aadaa Booranaa hammaa beeknuufi kan dhageenyee gurraa qabnu odeeffataa imala keenyaan fiigaa jirra. Waan aadaa tokko tokko kaafnees konkolaataan imalaa yaadaan Booranatti of argine. Ugguma yaa miidhagina aadicha! Utuu hinargin kan akkas miidhaaguusaa tilmaamne ijaarguuf ariifannus daandiin keenyaa gabaabbachuu hindandeenye. Wayita nuti imalaarraa jirru kanneen aadicha keessa beekan jila baalli walharkaa fuudhiinsa kanaaf ijaarsii galmaa akka geggeegeffamaa jiruufi sirboonni sadarkaalee gadaa garagaraafi shamarraniin akka geeggeeffamaa jiruu odeeffanne. Addaa bareedaa kanaa arguuf qalbiin ariifatteetti. Maalta'a gaafa akkanaa kana daandii dheeraa walitti butanii hodhanii!? Utuu yaadaa kanaan jirruu ciree nyaachuuf Magaalaa Walaayittaa Sooddoo geenyee dhaabbanne. Ciree erga nyaannee daandii dheeraan akka nuuf hafu tilmaamaa konkolaataa keenyattii nam'inee daandii eegalle. Wayita daandii kanaa imallutti qonnaawwan guguddaa hawwatoo, ijaaf boqonnaa ta'aan qalbii nu booji'an. Kan hundumaa caalaa nama dhibu ammoo bosonaa muuzii mul'atutti hedduu gammadaa, kan qabu kaameeraan waraabbataa, kaanis ijasaatiin qalbiin suuraa kaafataa imallee. Haroowwan guguddaa daandii kana cinaatti arginus ijaa hawachuu cinaatti imalaa keenya “Nagaan dhaqaa” waan jedhanii nu geeggeessanii deebi'an fakaatu. Itti naannofna, haroonis dabareesaa nutti naanna'a. Inni tokko isa tokkkotii nu kennee nu biraa deebi'a.
Wantan taajjabe keessaa, naannawaa haroo kanneenitti sochiin qonnaa mul'atu hangas mara ta'uu baatu, qabeenya bishaanii naannawicha jiru hanga barbaadamuu fayidaa barabaachisuuf hinoolle jechuun ni danda'ama. Hawwata tuurizmii, qonna jallisii, horsiisaa qurxummii, dirree bashannanaa gochuun babal'isuun faayida hedduuf oolchuun ni danda'ama ture. Kanaaf haroowwan ciisanii aduutti of qaqan kanneen faayidaa dinagdeefis ta'e hawaasummaaf oolchuun itti yaadamuu feesisa. Haroowwan caamoo shaallaa, abijaataa fa'aa...
Waan bishaan lafatti badaa jirutu qalbii na boojinaan, waa jechuuf dirqamee malee imalli keenyaa ittifufeera.
Magaalaa fuduraafi muduraa, magaalaa burqituuwwan 40 itti argamuu Magaalaa Arbaa Minciin geenye. Magaalattii yeroo muraasaaf keessatti haa boqonnu malee, miidhaginnishee kan namatti toluudha. Imaltoota nu waliin jiran keessaa irra jireessi magaalattiin qurxummiidhaan waan beekamtuuf qurxummii nyaachuuf fedhii haa qabaatan malee yeroon qabnu nuuf hineeyyamne ture. “Magaalaa Arbaaminci dhufanii qurxummii hinnyaatin galuun qaaniidha” jedhe imaltoota keessa tokko. Akka aaruus akka baacuus ta'eeti, “Qaanii qofaa miti. Akka nama Daayimandii argatee itti fincaa'uuti” jedhe qurxummii nyaachuu dhabuusaattii gaabbii qabu ibsachuuf jecha. Akkaataa ibsasaatti hedduu ajaa'ibsiifamaa gara magaalaa Koonsootti imala itti fufne...
Torban kana/This_Week 17679
Guyyaa mara/All_Days 1442459